स्पष्टीकरणकर्ता भिडियोहरूको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन (उदाहरणका साथ) | Martech Zone
स्पष्टीकरणकर्ता भिडियोहरूको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन (उदाहरणका साथ)
मङ्गलबार, जुन 3, 2014 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
तपाईंले सम्भवत धेरै वेबसाईटहरू देख्नुभएको छ उनीहरूको ल्यान्डि pages पृष्ठहरूमा एनिमेटेड भिडियोहरू प्रयोग गरेर। कुनै फरक छैन यदि तपाइँ तिनीहरूलाई व्याख्याकर्ता भिडियो वा कर्पोरेट भिडियो नाम दिनुहुन्छ; ती सबैले एउटै उद्देश्य प्रयोग गर्दछन्: उत्पादन वा सेवालाई सजिलो र द्रुत तरीकाले व्याख्या गर्न, जसले तिनीहरूलाई कुनै पनि व्यवसायको लागि उत्कृष्ट मार्केटिंग उपकरण बनाउँदछ।
त्यहाँ स्प्यान्डर भिडियोहरूको विभिन्न शैलिकहरू किन छन्? प्रत्येक शैली फरक प्रकारको दर्शकहरु लाई अपील गर्दछ र कुनै पनि भिडियो उत्पादन को बजेट लाई पनि प्रभावित गर्दछ। तपाईको दर्शकको ध्यान खिच्न र वास्तवमा रूपान्तरण गर्नका लागि तपाईले प्रत्येकलाई थाहा पाउनुपर्दछ शैली स्पष्टीकरणकर्ता भिडियो को। प्रश्न यो हो:
तपाईंको वेबसाइटको लागि एनिमेटेड स्प्यान्डर भिडियोको सब भन्दा राम्रो शैली के हो?
हामीले एनिमेटेड मार्केटिंग भिडियोहरूको सबैभन्दा लोकप्रिय शैलीहरूको सूची स collected्कलन गरेका छौं, साथै प्रत्येकको लागि हाम्रो विशेष सिफारिशहरूको साथ।
यो एउटा साधारण स्क्रीन क्याप्चर वा भिडियो फिल्म हो जुन कार्यक्रम, वेबसाइट वा सफ्टवेयरको प्रयोग कसरी गर्ने देखाउँदछ। स्क्रिनकास्ट भिडियोहरू सबैभन्दा कम बजेट प्रकारका भिडियो हुन् तर समान उपयोगी। यी भिडियोहरू ब्रान्डि than भन्दा शिक्षाको बारेमा बढी छन्। तिनीहरू सामान्यतया लामो भिडियोहरू हुन् (minutes मिनेट भन्दा बढि), र सम्भावितहरूको लागि राम्रोसँग काम गर्छन् जसले उत्पादनलाई कार्य गर्न अघि उनीहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर हेर्न चाहन्छन्।
कार्टुन शैली वा चरित्र एनिमेटेड भिडियो
यो बजारमा सब भन्दा लोकप्रिय एनिमेटेड व्याख्याकर्ता भिडियो प्रकारहरूमध्ये एक हो। कथा एक एनिमेटेड चरित्रको नेतृत्वमा हुन्छ, जो एक ठूलो समस्या हो जुन उसले वा उसले समाधान गर्न सक्दैन। त्यो बेलामा जब तपाईंको उत्पाद वा सेवा देखा पर्दछ ... दिन बचत गर्दै!
चरित्रले प्राय: तपाइँको ब्रान्ड व्यक्तित्व (लक्षित दर्शकहरू) लाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसैले यो अनुकूलन डिजाइन चरित्र हुनु महत्वपूर्ण छ जुन उनीहरूसँग साँच्चिकै सम्बन्धित छ, भावना र व्यक्तित्व दिएर तपाइँको ब्रान्डलाई मानवीय बनाउँदै। यस प्रकारका भिडियोहरूको ठूलो परिणामहरू छन् किनकि उनीहरूले द्रुत रूपमा दर्शकहरूको ध्यान खिच्छ र हेर्न मजाको रूपमा छन्।
यो ट्रेंडी र कूल टेक्निक मूलतः एक इलस्ट्रेटरद्वारा सिर्जना गरिएको हो जसले क्यामेराद्वारा रेकर्ड गरिरहेको बेला व्हाइटबोर्डमा तान्यो। पछि, यस प्रविधीको विकास भएको छ र अब डिजिटल रूपमा सिर्जना गरिएको छ। २०० 2007 मा, यूपीएसले ह्वाइटबोर्ड विज्ञापनहरू प्रदर्शन गर्‍यो, र २०१० मा रोयल सोसाइटी अफ आर्ट्सले चयनित भाषणबाट ह्वाइटबोर्ड एनिमेसनहरू सिर्जना गर्‍यो, जसले आरएसए युट्यूब च्यानललाई विश्वव्यापी # १ गैर-नाफा च्यानल बनायो।
ह्वाइटबोर्ड एनिमेसनहरू एक सुपर आकर्षक टेक्निक हुन्, किनकि यससँग शैक्षिक दृष्टिकोण रहेको छ, जहाँ सामग्री दर्शकको आँखाको अगाडि सिर्जना गरिएको हुन्छ।
मोशन ग्राफिक्स, अनिवार्य रूपमा, गतिशील ग्राफिक तत्व हुन् जुन र colors्ग र आकारहरूको शक्ति प्रयोग गर्दछ जटिल सन्देशहरू प्रदान गर्न जुन अन्यथा भन्न असम्भव हुने थियो। यी भिडियोहरूले अधिक गम्भीर प्रोफाइलको साथ व्यवसायका लागि संलग्न शैलीहरू प्रस्ताव गर्दछन् र अमूर्त अवधारणाहरूको व्याख्या गर्नको लागि उत्तम तरिका हो।
यी व्याख्याकर्ता भिडियोहरू विशेष गरी B2B संचार प्रयासहरूको साथ प्रभावकारी छन्।
मोशन ग्राफिक्स थ्रीडी एलिमेन्टहरूको साथ
मोशन ग्राफिक्स एनिमेसन थ्रीडी एलिमेन्ट्स एकीकरणले अधिक सुरुचिपूर्ण र परिष्कृत लुक ल्याउँछ। तिनीहरू तपाईको कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा माथि उभिनका लागि आदर्श छन्।
मोशन ग्राफिक्स कम्पनीहरू र नयाँ टेक्नोलोजी, डिजिटल सेवाहरू, अनुप्रयोगहरू वा सफ्टवेयर सम्बन्धित उत्पादनहरूको लागि उत्तम विकल्प हो।
मोशन ग्राफिक्सको साथ कार्टुन शैली
मोशन ग्राफिक्सको साथ कार्टुन शैली स्प्यालेयर भिडियोहरू त्यहाँ बाहिर लोकप्रिय एनिमेटेड भिडियो को एक लोकप्रिय प्रकार हो, र यो सरल जस्तो देखिन्छ, तिनीहरूले प्रविधिको मिश्रण सँगै ल्याउँछन्। कार्टुन चरित्रहरूले कथाको नेतृत्व गर्दछ र दर्शकहरूसँग नजिकको दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ, जबकि गति ग्राफिक्स एनिमेसनको प्रयोग जटिल अवधारणाहरूको वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
यस शैलीको साथ, हामी दुबै संसारको सब भन्दा राम्रो पाउँछौं - एक कार्टुन शैली भिडियो को मैत्री पक्ष र हास्यास्पद रूपक र गति ग्राफिक्स तकनीक को आकर्षक एनिमेसन को शक्ति।
हामी यसलाई B2C संचारको लागि सिफारिस गर्छौं, तर तिनीहरू साना व्यवसाय र स्टार्ट अपको लागि पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्दछन्।
स्टप-मोशन वा क्लेमेसन एनिमेटेड भिडियोहरू
स्टप मोशन स्प्यान्डर भिडियोहरू सबै भन्दा पुरानो प्रविधि हुन् किनकि ती उच्च-डिजिटल डिजिटल प्रविधिमा निर्भर छैनन्! यी हस्तलिपि भिडियोहरू हुन् - फ्रेम द्वारा फ्रेम पूरा।
यो एनिमेसन प्रत्येक फ्रेम रेकर्ड गरेर, वा अझै पनि तस्विर र त्यसपछि रेकर्ड फ्रेमहरू द्रुत उत्तराधिकारमा फिर्ता खेल्दै उत्पादन गर्न अधिक लामो लिदै उत्पादन गरिन्छ। परिणामहरू पूर्ण रूपमा फरक र एकदम अचम्मका छन्। रोक्नुहोस् गति एक सुन्दर प्रविधि हो जब राम्रोसँग गरिन्छ, ती पनि महँगो पर्दछन्।
यदि तपाईं आफ्नो दर्शकहरूसँग भावनात्मक दृष्टिकोण प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी यो प्रकारको भिडियो सिफारिस गर्छौं।
थ्रीडी एनिमेटेड भिडियोहरू
A पेशेवर थ्रीडी एनिमेटेड भिडियो वास्तवमै अचम्मको हुन सक्छ, किनकि त्यहाँ थ्रीडी भिडियोले के गर्न सक्दैन भन्ने सीमा छैन। जे होस्, यो विकल्प सब भन्दा महँगो हो, त्यसैले तिनीहरू सीमित बजेटको साथ स्टार्टअपका लागि विकल्प छैनन्।
यदि तपाईं वास्तवमै थ्रीडी एनिमेटेड भिडियो बनाउने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ र यो तपाईं खर्च गर्न सक्नुहुनेछ भने, तपाईंले पहिले गृहकार्य गर्नु पर्छ र अनुभवी कम्पनीहरूको लागि खोजी गर्नुपर्छ। कम बजेट थ्रीडी एनिमेटेड भिडियोले वास्तवमा नकरात्मक परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
अब तपाइँसँग कस्तो किसिमको एनिमेटेड स्प्यान्डर भिडियो तपाइँको व्यवसायको 'अवतरण पृष्ठ' को लागी उत्तम सूट गर्दछ, र जुन तपाइँको दर्शकको ध्यान आकर्षण गर्दछ सबैभन्दा उत्तम अवलोकन छ। थप चाहनुहुन्छ? यम यम भिडियोको निःशुल्क ईबुक डाउनलोड गर्नुहोस् - स्पष्टीकरणकर्ता भिडियोहरूको लागि अन्तिम मार्गदर्शक!
प्रकटीकरण: यम यमले यस पोष्टलाई सँगै राख्न मद्दत गर्‍यो Martech Zone पाठकहरू र हामी केही परियोजनाहरूमा उनीहरूसँग सिधा काम गरेका छौं!
टैग: 3d एनिमेटेड भिडियोहरू3d एनिमेसन3d भिडियोएनिमेटेड भिडियोकार्टुन भिडियोचरित्र एनिमेटेड भिडियोमाटो एनिमेसनक्लेमेसनव्याख्याकर्ता भिडियोव्याख्याकर्ता भिडियोहरूगति ग्राफिक्सगति ग्राफिक्स भिडियोस्क्रीनकास्ट भिडियोस्टप-मोशनव्हाइटबोर्ड एनिमेसन भिडियोव्हाइटबोर्ड व्याख्याकर्ता भिडियो
कसरी महिला र पुरुषहरूले सामाजिक मिडिया र मोबाइल बिभिन्न प्रयोग गर्दछन्
सेप्टेम्बर १,, २०११ 21::2014० अपराह्न
म यी प्रकारका चीजहरूलाई सेराra्ग गर्ने क्रममा छु त्यसैले यसको राम्रो उदाहरणको साथ राम्रो वर्णन गरिएको छ।
यो जानकारीपूर्ण पाठ र भिडियो को लागी धेरै धन्यवाद।
मई 14, 2015 मा 6: 16 PM
अब जब जब मेरो ग्राहकहरु लाई मलाई बुझाउने भिडियो के प्रकार को म सोध्छु मँ उनीहरु लाई देखाउन यो उपयोगी गाईड छ। यस मार्गनिर्देशनलाई सँगै राख्नु भएकोमा डगलस धन्यवाद। के त्यहाँ जे भए पनि तपाईले मेरो ब्ल्गमा मेरो व्यवसाय फिचर गर्न सक्नुहुनेछ? मैले टिप्पणी ईमेलमा मेरो ईमेल राखेको छु